Madaxweynayaashi hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo heshiis dhex maray faah faahin. – Xeernews24
Madaxweynayaashi hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo heshiis dhex maray faah faahin.
7. August 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Ugandha waxaa ay ka heshiiyeen khilaafkii u dhexeeyay ee ka dhashay doorashooyinkii dalka ka dhacay.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo aan lagu kala kicin kadib labada dhinac ay ku gaadheen heshiis is cafis iyo is faham ah iyagoo ka heshiiyay mugdigii u dhaxeeyay wada shaqayn bayna ku balameen sida ay sheegayaan wararka aan ka heleyno magaalada Kampala.
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khilaafkoodu meel sare gaadhay horaantii sanadkan kadib markii doorashadii madaxweynaha ay soo dhowaatay. Waxana kulankan ay yeesheen uu yahay kii ugu horeeyay oo si fool ka fool ah u kulmaan.
Warar ayaa sheegaya in dowlada Ugandha ka shaqeysay heshiiska labada siyaasi iyadoo Sheekh Shariif uu degen yahay magaalada Kampala halka Xasan Sheekh Maxamuud uu degen yahay dalka Tanzania,waxaana la rumeysan yahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu isgu yimid Kampala si kulanka uu u dhaco.
Inkastoo labada siyaasi ay haatan heshiis gaadheen ayaan hase ahaatee la ogeyn inay siyaasada hal meel uga soo jeesan doonaan iyadoo weli la rumeysan yahay in labaduba aysan siyaasada ka bixin.
Si kasta ha ahaatee heshiiska ay gaadheen labadii Madaxweyne ee loogaga adkaaday doorashadii horaantii Febraayo ka dhacday Muqdisho ayaa dadka qaarkii ayaa waxa ay rumeysan yihiin in uu culeys ku noqon karo dowlada uu Madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/xasan-iyo-sheekhsharif-1.jpg 500 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-07 19:51:262017-08-07 19:51:26Madaxweynayaashi hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo heshiis dhex maray faah faahin.
AFKA SOOMAALIGA IYO ISBEDDELKA WAAYAHA Geeloow Gacal Waa Beer, Bahi Waa Jaqas Weeye Siyaasadaadu